Mapakeji kubva kudura redu muChina anozoendeswa nePacket kana EMS zvinoenderana nehuremu uye saizi yechigadzirwa. Mapakeji anotumirwa kubva kudura redu reUS anotumirwa kuburikidza neUSPS. Naizvozvo, nekuda kwezvikonzero, zvimwe zvinhu zvinotumirwa mumapakeji akapatsanurwa.
Isu hatina masimba pamusoro penzvimbo dzetsika, Hatina mhaka yemubhadharo wecustoms kana zvinhu zvacho zvatumirwa semitemo nemabasa ekuunza kunze kwenyika anosiyana kwazvo nyika nenyika. Nekutenga zvigadzirwa zvedu, unobvuma kuti imwe kana akawanda mapakeji anogona kutumirwa kwauri uye anogona kuwana yetsika fizi pavanosvika munyika yako.
Australia, New Zealand 10-21 bhizimisi mazuva
Mexico, Central America, South America 15-21 bhizimisi mazuva
Dzimwe Nyika 15-21 bhizimisi mazuva